Imvunulo ejwayelekile kaJalisco, isici sobunikazi baseMexico | Izindaba Zokuhamba
Luis Martinez | 12/05/2021 09:19 | Cultura, I-México
Ingubo ejwayelekile kaJalisco inokufana okuningi nezingubo ezijwayelekile ze insangu, kuze kube seqophelweni lokuthi bavame ukudideka. Eqinisweni, kukholakala ukuthi laba bazalwa edolobheni laseJalisco lase UCocula. Noma kunjalo, azifani ncamashi. Esesibili sazo sifaka izinkinobho emabhulukweni nakwejakhethi, ngaphezu kokuba nemibala ehlukahlukene kakhulu.
Kodwa-ke, imvunulo ejwayelekile eyiJalisco, okuzongenwa yilo mbhalo, isangulukile. Njengoba igama layo liphakamisa, sizokutshela ngezingubo zakudala zalesi sifundazwe saseMexico, esisentshonalanga yezwe futhi sinqume lezo I-Nayarit, Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato, I-Michoacán y Colima, kanye nePacific Ocean.
1 Okukhethekile kwengubo ejwayelekile kaJalisco
1.1 Umlando wesudi
1.2 Ijalisco imvunulo ejwayelekile yabesifazane
1.3 Imvunulo kaJalisco yamadoda
2 Isetshenziswa nini ingubo ejwayelekile kaJalisco
Okukhethekile kwengubo ejwayelekile kaJalisco
Sizoqala ngokwenza umlando omncane maqondana nalezi zingubo bese sigxila ezingutsheni ezijwayelekile zabesilisa nabesifazane. Zombili zihluke kakhulu, ziningi enemibala futhi ethokozile lokho kwabesifazane.
Imvelaphi ye- I-charro suit, okuyinto, njengoba kungenzeka usuvele uyitholile, iyona yendabuko evela eJalisco, eyaqala ngekhulu le-XNUMX. Kuyathakazelisa ukuthi izingubo ezikhomba iMexico phesheya zazalwa, ngokusho kwayo, emazweni aseSpain, ikakhulukazi e Salamanca.
Njengoba wazi, abahlali bakulesi sifundazwe babizwa, charros. Futhi, uma ubheka izingubo zabo ezijwayelekile, kuyiqiniso ukuthi ziyefana nemvunulo yakwaJalisco. AbaseSpain baqukethe amabhulukwe aqinile amnyama, ijakhethi elifushane elinombala ofanayo, namabhuzu aphezulu okugibela. Futhi, isigqoko siyafana, yize sinamaphiko amancane kakhulu.
UCharros onengubo ejwayelekile kaJalisco
Le ngubo ibizodlulela eMelika ngokufika kwe-Hispanics futhi izokwamukelwa ku- Indawo yaseJalisco. Kodwa-ke, ithole ukuguqulwa okuningi. Emakhulwini eminyaka alandelayo, yathuthukiswa ngokungeza imifekethiso eminingi eyenziwe ngezandla nemihlobiso. Kakade ku-XIX, bekuyiyona esetshenziswe yi chinacos, igama elinikezwa amadoda ayesebenza emasimini.
Njengoba ilukuluku, sizokutshela ukuthi umbusi UMaximilian waseHabsburg Wayengumuntu othanda kakhulu isudi ye-charro. Waze wayisebenzisa kaningana ezama ukuzivumelanisa nesizwe sakhe esisha. Kakade ngoguquko lwaseMexico, le ngubo yathandwa yaba yi- imvunulo enkulu yaseMexico, sidlula lezo ezijwayelekile kwezinye izifunda zezwe (uma ufuna ukwazi okwengeziwe ngalezi zakamuva, siyakweluleka Lesi sihloko).
Kodwa-ke, okwamanje akuzona zonke izingubo ezijwayelekile ze-charro ezifanayo. Zihlukile izingubo zomsebenzi, ingubo ephelele kanye nokugqoka okugcwele, noma kungekho mehluko phakathi kwabo. Ukuphela kokuhlala ukunethezeka kwemifekethiso nemihlobiso abazifakile. Njengoba kungenzeka uqagele, okwangaphambili kusangulukile kunokwakamuva, yize zonke zinhle kakhulu futhi zishaya.
Uma uvakashela iGuadalajara, inhlokodolobha nedolobha elidume kakhulu esifundazweni saseJalisco, ngeke kube nzima kuwe ukuthola imvunulo yakho ejwayelekile. Ngokunengqondo, abantu bakhona abayisebenzisi nsuku zonke, kodwa bayayisebenzisa Basebenzisa noma yimuphi umcimbi ukuwugqoka. Kepha, ngaphandle kokuchitha isikhathi, sizokhuluma nawe ngemvunulo ejwayelekile yabesifazane yaseJalisco.
Ijalisco imvunulo ejwayelekile yabesifazane
Imvunulo ejwayelekile yowesifazane waseJalisco
Abesifazane baseJalisco bagqoka ingubo eyodwa enesiketi eside. Kwenziwe nge ngobe, intamo yayo iphakeme futhi imikhono yayo iluhlobo lwe-baggy. Futhi, engxenyeni yayo engenhla, ekuphakameni kwesifuba, iyathwala amanye amabhola amise okwamavee lokho kuyagqagqana. Futhi isiketi sibanzi impela.
Ngokuphathelene nombala, imvamisa ithoni eyodwa, yize lokhu kuqhathanisa nokwenama amateyipu ombala ukuthi iyagqagqana futhi nangolayini eyigqoka njengemihlobiso. Ngokuqondene nezicathulo, yenziwe ngezintambo futhi inezesekeli ezihlukile. Ekugcineni, isigqoko sekhanda senziwa ngamaribhoni afana nalawo avela engutsheni.
Imvunulo kaJalisco yamadoda
Ngokuphathelene nesudi ye-charro yamadoda, iqukethe, engxenyeni yayo ephezulu, yehembe lapho a ibhantshi elifushane. Ifinyelela engxenyeni engezansi yesifuba futhi imikhono yayo imifushane ngokulinganayo ukukhombisa imihlobiso yesiliva konodoli. Ngokufanayo, ingahlotshiswa ngayo izinkinobho ezingamashumi ayisikhombisa zethoni efanayo, yize nazo zingaba ngegolide.
Ngokuqondene nebhulukwe, aqinile, ama-suede noma indwangu namathoni amnyama. Babuye baphathe nquma yonke imilenze. Izingubo zihambisana namabhuzu entambo anombala ofanayo nesudi.
Kufanele kukhulunywe ngokukhethekile nge Sombrero. Ekuqaleni yayenzelwe ukumelana nemiphumela yelanga laseJalisco kanye nokuvikelwa ekuweni kwehhashi. Ngalesi sizathu, zenziwa ngezinwele zikanogwaja, uboya bezwakala noma utshani bukakolweni futhi zazinamatshe amane noma amaribhoni engilazini yazo eyakuphindaphinda futhi yakwenza kwamelana kakhulu.
Umphetho walesi sigqoko esivamile mkhulu futhi ubanzi, futhi ebizwa emhlane wayo. Ekugcineni, kwesinye isikhathi kuhlotshisiwe itshali noma imidwebo efekethisiwe. Lo mklamo womsebenzi wasensimini wawusizo kangangokuba waba yinto ejwayelekile kulo lonke elaseMexico.
Ekugcineni, olunye ucezu olungalahlekile kwisitayela se-charro yi- iserape. Kulokhu, akuyona ingubo, kodwa uhlobo lwengubo abagibeli abayiphethe kanye nesali yehhashi labo. Ngakho-ke, ngeke uyibone lapho uya emidansweni noma emibonweni yezinyawo, kodwa uzoyibona uma kukhulunywa ngokudlula kwamahhashi noma imibukiso ye-charros ukuthi sizokukhombisa ngokulandelayo.
Isetshenziswa nini ingubo ejwayelekile kaJalisco
Impela, uma sesichazile ukuthi imvunulo yakwaJalisco yabesilisa nabesifazane injani, sizogxila ekukhulumeni nawe mayelana imicimbi nemikhosi lapho kuvame kakhulu ukuthola abantu begqoke kuzo.
Umbukiso omuhle kakhulu lapho kugqokwe khona lezi zingubo yilezi charrería. Imicimbi yendabuko yamahhashi yezwe lama-Aztec ithola leli gama. Zikhula ezinkundleni ezibizwa kanjalo amashishi we-charro futhi ziqukethe ukuthi abagibeli benza izivivinyo ezahlukahlukene ngemuva kwamahhashi abo.
Njengomdlalo, yazalwa ekuqaleni kwekhulu lama-XNUMX ukukhumbula imisebenzi yezinkomo emkhakheni eyayingasasebenzi. I-charrería ihlelwe eMexico ngumfelandawonye futhi amasiko ayo abonwa njenge Amagugu Angaphatheki Obuntu yi-UNESCO ukuyigcina.
Njengamanje, abesifazane nabo badlala indima ebalulekile kwi-charrería. Hhayi ngoba unyaka ngamunye kukhethwa umuntu oyedwa u-reina lokho kuphethe ukuvula imikhosi ehlukene, kepha futhi ngoba ubamba iqhaza emincintiswaneni yamahhashi. Bangama-Amazon ababamba iqhaza, ngaphezu kwakho konke, ekuyalweni okwaziwa ngakho charra skirmish. Iqukethe amaqembu ama-amazon ayisishiyagalombili enza ama-choreographies ngemuva kwamahhashi abo kanye nesigqi somculo.
Kepha, ngenhlanhla, ama-charra amaningi ayakhuthazwa ukuba azijwayeze ezinye izinhlobo zombukiso. Phakathi kokubaluleke kakhulu, sizokhuluma ngawe ihhashi cove, abagibeli bezinkunzi nabamahhashi, ama-piales asendlini, ama-manganas ngezinyawo noma ngehhashi, uhlu olufushane eringini noma isinyathelo sokufa.
Ngokunengqondo, kulezi zimo abesifazane bagqoka ezinye izinhlobo zezesekeli zesudi yabo. Phakathi kwabo, amabhuzu ane-spurs, isigqoko nabasebenzi. Ngaphezu kwalokho, babeka phezu kwehhashi intaba ekhethekile ebizwa ngokuthi packsaddle.
AmaCharros amele ukudlula kokufa
I-charrería ihlangene nesiko laseMexico kangangokuba njalo ngoSepthemba 14 izwe lama-Aztec ligubha i- Usuku lweCharro. Kuyo yonke insimu yayo (uma ufuna ukufunda i-athikili mayelana Veracruz, chofoza lapha) kubanjwa imibukiso yamahhashi neyomculo ukuyikhumbula. Mayelana neyokugcina, i- mariachi bangabaphikisi abaphelele.
Mayelana nesimo saseJalisco, esikhuluma ngaso, ngalolo suku iGuadalajara igubha i- Umhlangano Wamazwe Omhlaba waseMariachi noCharrería. Njengoba ungacabanga, imigwaqo yenhlokodolobha ihlotshisiwe futhi izinkulungwane zamadoda nabesifazane zihamba ngayo zigqoke imvunulo ejwayelekile yaseJalisco futhi zihumusha umculo wesintu.
Imicimbi igxile kakhulu ku- Liberation Square, lapho kunemikhosi eminingi khona. Kepha kukhona nemibhikisho, imidlalo ye-gala ku- Itiyetha elisikiwe ngomqala futhi kwaculwa ngisho uquqaba ku I-Basilica yaseZapopán.
Amaqembu abantu enza izinhlobo zomculo ezifana ne- Isiraphu ye-Tapatio, owaziwa nangokuthi "isigqoko saseMexico" ngoba sasishiywa phansi futhi sasina sizungeza sona. Kungumdanso wokuqomisana okumele siwufune imvelaphi yawo kuNguquko lwaseMexico.
Okudume ngokulingana kakhulu kulolu hlobo lokugubha yi Culebra, umdanso obuyisela kabusha umsebenzi emasimini, Iguana futhi i ICaballito, phakathi kweminye imidanso eyenziwa ngabahumushi ngenkathi belalele i- imariachis izwakala. Leli igama lezingoma ezihambisana nemidanso nemibukiso ye-charrería nokuthi, ngakho-ke, zihlobene kakhulu nezingubo ezijwayelekile zikaJalisco.
Ekuphetheni, sikutshele ngakho Imvunulo ejwayelekile kaJalisco kwabesilisa nabesifazane. Kepha sikuchazelile nangokubaluleka komhlaba we-charrería eMexico, ofaka lokhu kugqoka kanye nemisindo ye-mariachi. Konke lokhu kulungiselele isiko eliwele imingcele yezwe lama-Aztec ukuze lidume emhlabeni wonke.
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba Zokuhamba » América » I-México » Imvunulo ejwayelekile kaJalisco